Sokajy:Tanàna ao Madagasikara Info. About. What's This?
ⓘ Sokajy:Tanàna ao Madagasikara
Ambodifahitra dia tanànanandriana miorina eo ambany atsimo aminny tehezanny vohitrAmbohidrabiby. Voadidina hadivory ny aminny ilany atsimony.Rakotra hazo ny tanàna indrindra fa ny pibasy.
Eo aminny 25 kilometatra eo miantsinanana raha miala anAntananarivo renivohitra no misy ny kaominina Anjeva Gara. Lalan-tany no mihazo anAnjeva raha avy ao Ambohimanambola, misy taksiborosy mandeha aminizany miainga avy eo Ambohijatovo, Antananarivo Renivohitra). Ary lalana godorao raha avy any Ambohimalaza, misy taksiborosy mandeha aminizany miainga avy eo Mahazo, Antananarivo Renivohitra.
21.452670°S 47.085690°E ﻿ / -21.452670; 47.085690 I Fianarantsoa dia tanàna any atsimoni Madagasikara, renivohitry ny faritanini Fianarantsoa ary ny faritra Haute Matsiatra. Tanàna noforonin ny Merina tamin ny taonjato faha-19 ho renivohitry ny tany nanjakanny Betsileo taloha i Fianarantsoa. 1 200 metatra ny haavonny toerana misy anilay tanàna ary efatra alina sy iray hetsy eo ny isam-ponina araka ny fanisana natao taminny taona 2001.
Mahajanga na Majunga, dia tanàna any amorontsiraka andrefani Madagasikara. Eo aminny vavaranoni Betsiboka ny misy azy. Izy ny renivohitra ny faritani Mahajanga. 550 km any avaratra andrefan Antananarivo ny misy azy.
Mamoriarivo dia tanàna miorina eo ambany avaratry ny tendrombohitra Ambohitrandriananahary. Ity tendrombohitra ity moa dia eo ampita avaratra antsinananny vohitra Ambohidrabiby no misy azy. Avy eo Talata Volonondry no mivily aminny lalana ho any Ifalimanjaka. I Mamoriarivo dia tanàna roa mitomandavana avaratra atsimo izay samy voahodidina hadivory avokoa. Ny nahatonga ny tanàna hatao hoe Mamoriarivo dia teo i Andrianjaka no namory ireo arivolahy nahitana andriana, hova, mpanompo, izay nentiny nonina teny Antananarivo. Taminizany dia mbola tsy nisy tanàna teo. Tato aoriana dia nisy tanàna n ...
ⓘ Tanàna ao Madagasikara
hangezan ny kontinenta eoropeana na in - 15 - n i Madagasikara Any Amerika Avaratra no misy ny Mainland na ny Renitany, ao amin io Mainland io ny 48 amin ny 51 faritany
Misy faritany enina eto Madagasikara Tsy vondom - bahoaka itsinjaram - pahefana izy ireo, sahala amin ny distrika eto Madagasikara koa. Ny faritra, izay miisa
Ny tanàna dia vohitra lehibe honenan olona maro ary efa hary voatra toy ny làla - migodàna, trano lehibe, kianja malalaka, sns Araka ny Firenena Mikambana
Ny Baiboly Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara izay hafohezina amin ny hoe Baiboly DIEM, dia fandikan - teny ny Baiboly ho amin ny teny malagasy niarahan ny
Faritanin i Toliara dia anisan ireo faritany enina eto Madagasikara Izy no faritanin i Madagasikara lehibe indrindra raha ny velarana no jerena any amin
Ny Faritanin i Mahajanga dia faritany eto Madagasikara Ireto avy ny tanàna lehibebe ao amin ny Faritanin i Mahajanga: Ambatoboeny Ambatomainty Analalava
Misy zavatra tsy ampy anatin ity fizaràna ity. Ilaina mandray anjara ianao Madagasikara Kaominina any Madagasikara Fenoarivo Ambatofinandrahana
Ambalaharongana dia tanana kely ao avaratra atsinanani Madagasikara. Ny fokontaninAmbalaharongana dia ao anatinny kaominina Bevonotra, distrikani Sambava, faritri Sava.